भजन The१ सन्देश पद पद द्वारा | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना भजन The२ पद पद द्वारा पद
आज हामी भजन २२ को पद पढेर पढ्छौं। अरु भजनहरु जस्तै, भजन २२ हो सहयोगको लागि प्रार्थना गाह्रो समयमा। लेखकले उनीसँग ब्यवहार गर्ने मान्छेले उनीसँग अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको स्वभाव व्यक्त गर्दछ। उनले कठिनाइको समयमा हामीलाई छुटकारा दिन सक्ने परमेश्वरको क्षमतालाई स्वीकारे र यसलाई पहिले अनुभव गरेको अनुभवले श्रेय दिए। ऊ अब चाहन्छ कि परमेश्वरले उसलाई बचाउनु हुन्छ र फेरि पनि सहायता गर्नुहुन्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भजन २२, यसको पद पददेखि पदसम्मको सन्देश भविष्यसूचक भजन हो जसले मसीहको कष्टलाई दर्शाउँछ। भजनसंग्रहका लेखक जो मानिस डेभिड नै थिए भन्ने कुरालाई हेर्ने सुअवसर दिइएको थियो कि ख्रीष्टले मानिसजातिको खातिर के गर्नुपर्नेछ र यसले पाउने आशिष्‌हरू पनि। यो उनले देखे र आफ्ना गीतहरु मार्फत अगमवाणी गरे। र नयाँ नियमका विवरणहरू पढेझैं हामी पनि यस भजनलाई सजिलैसँग हाम्रा प्रभुले भोगेका पीडाहरूसँग सम्बन्धित छ र कसरी उसले बिन्ती गर्न थाल्छ कि परमेश्वरले त्यो कचौरा उहाँमाथि राखिदिनुहुनेछ। यो भजन हाम्रो लागि विश्वासीहरूको रूपमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले हामीलाई ख्रीष्टको कष्टहरूसँग सामना गर्न मद्दत गर्दछ र त्यस्तै अवस्थामा हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरमा पोखाउन मद्दत गर्दछ।
VERSE द्वारा MEANING VERSE को प्रचार गर्नुहोस्।
पद & र।: हे मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, तपाईंले मलाई किन त्याग्नु भयो? तपाईं किन मलाई यति टाढा हुनुहुन्छ मद्दत गर्न, र मेरो गर्जनका शब्दहरूबाट? हे मेरो परमेश्वर, मैले तपाईंलाई दिउँसो रोएँ तर तपाईं नजिक हुनुहुन्न। र रातको मौसममा, म चुप लाग्दिन.
यसले पीडाको पुकारलाई चित्रण गर्दछ, विशेष गरी जब परमेश्वर टाढा हुनुहुन्छ र हाम्रो पुकार सुन्न इच्छुक हुनुहुन्न। पहिलो पदमा ख्रीष्टले मानिसजातिको पापहरू क्रूसमा झुण्डिरहँदा बयान गरेको उही भनाइ थियो। उसले गरेको पीडा र असुविधा उनको लागि ज्यादै धेरै थियो र उनलाई बुबाले त्यागेको महसुस गरे। यस्तो परिस्थिति जुन हामी व्यक्तिविशेषको रुपमा सामना गर्छौं भन्दा अलि फरक छैन। हामी कहिलेकाँही असहनीय चुनौतीहरूको बिन्दुमा पुग्छौं जहाँ यस्तो लाग्दछ कि भगवानले हामीबाट आफ्नो सहयोग फिर्ता लिनुभएको छ र हामीले हाम्रोलागि उसले गरेको बिन्ती कम्तीमा हामी चाहन्छौं हाम्रो बिन्ती सुन्नु।
पद 3: हे परमेश्वर तपाईं मात्र पवित्र हुनुहुन्छ, इस्राएल का गीतहरू बास गर्नुहुन्छ।
यद्यपि लेखक असहाय अवस्थामा थिए तर उनले परमेश्वरको पवित्रता र विश्वासयोग्यतालाई स्वीकार्न सकेनन्। जीवन कठिन छ कि छैन भनेर जान्ने, भगवान सधैं वफादार रहनुहुनेछ। र एउटा कुरा भने पक्का छ, गुनासो गर्नु राम्रो शर्त हुँदैन किनकि गिस आफ्ना मान्छेहरुका गुनासोहरु मा छैन तर तिनीहरूको प्रशंसा।
पद & र।: हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले तपाईंमाथि भरोसा गरे: तिनीहरूले भरोसा गरे र तपाईंले उनीहरूलाई बचाउनु भयो। तिनीहरूले तपाईंमाथि भरोसा राखे अनि तिनीहरू निराश भएनन्.
परमेश्वरको वफादारिताले आफ्ना मानिसहरूलाई उनीहरूको बन्धनको बन्धनबाट कसरी छुटकारा दियो भन्ने कुरा उहाँ सम्झना गराउनुहुन्छ। तिनीहरू दासत्वमा धेरै समय को लागी कष्ट भोगेका थिए र उद्धारको निम्ति उनीमाथि भरोसा राख्दै परमेश्वरलाई पुकार्न थाले। परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुभयो र आफ्नो पराक्रमको शक्तिले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। र बस रूपमा आफ्नो शब्द तिनीहरूले उहाँलाई सम्म देख्यो किनभने, तिनीहरू न, लज्जित हैरान थिएनन्, भने थियो।
पद 6: तर म कीरा हुँ, अनि कोही मानिस छैन। मानिसहरू मबाट लज्जित छन्। तिनीहरूले मलाई निन्दा गर्छन्.
जसलाई परमेश्‍वरले सुम्पनु भएको थियो त्यसको बिपरित, लेखकले आफूलाई गँड्यौला भन्छन् र मानिसहरूले घृणा गरे। गँड्यौला सरीसृप यति असहाय र कमजोर जो यसलाई सजिलै मार्न सकिन्छ; भजनरचयिताले आफूलाई जस्तो मन पराए त्यस्तै थियो। ऊ कुनै मानिसलाई नजिकको जस्तो देखिंदैन थियो जसको परमेश्वर उसलाई बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ धार्मिकरूपमा बाँच्नुभयो र मानिसहरूका लागि आफूलाई अर्पण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूले उनलाई बदनाम गरे र यसको साटो तिरस्कार गरे।
पद & र।: सबै मानिसहरूले मलाई हाँसोको पात्र बनाउँदछन्: तिनीहरूले आफ्ना ओठहरू निकाल्छन् र टाउको हल्लाउँदछन् र भन्छन्, “हजुरले उनलाई बचाउनु हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्छु किनभने उसलाई बचाउनु भयो।”
यो हामी विश्वास गर्नेहरूसम्म पुग्न सक्ने सबैभन्दा कठिन पोइन्ट्समध्ये एक हो। एक यस्तो बिन्दु जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरमा यति धेरै भरोसा राखेका छन् भनेर हामीलाई गिल्ला गर्न सुरू गर्दछन्। यो भजनरचयिताको अनुभव थियो र यो कुराको संकेत पनि हो कि येशूले पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरूले उहाँलाई हाँस्दै भने, “यदि ऊ वास्तवमा उसलाई प्रेम गर्छ भने परमेश्वरले उसलाई बचाउनु पर्छ।" वास्तवमा, उनीहरूले उनलाई आफुलाई बचाउन भने किनभने उनी परमेश्वरको छोरा थिए।
पद & र।: म मेरो आमाको छाती मा थियो जब तिमी मलाई आशा बनाउन didst: तर तिमी गर्भमा मलाई लगे जसले हौ। म जन्मनु भन्दा अघिदेखि तपाईं माथि थर्किएको छु। तपाईं आमाको गर्भबाट मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
यहाँ भजनरचयिताले हामीलाई परमेश्वरमा यति धेरै भरोसा राख्ने कुरा प्रकट गरे। उनलाई उनको जन्मको समयदेखि नै परमेश्वरको हेरचाहमा राखिएको थियो र त्यसबेलादेखि नै परमेश्वरले उनलाई हेरचाह गर्नुभयो र हेरचाह गर्नुभयो। ऊ आफ्नो परमेश्वर भएको थियो, ऊ हो र सधैं हुनेछ।
पद २१ र २२: मबाट टाढा नहुनुहोस्; स trouble्कष्ट नजिक छ; त्यहाँ मलाई साथ दिने कोही पनि छैनन्। धेरै साँढेहरूले मलाई घेरेका छन्। बाशानका बलिया साँढेहरूले मलाई घेरेका छन्।
ऊ फेरि त्यही कुराको लागि आउन मदत गर्दै आएका उही परमेश्वरलाई पुकार्न थाल्छ। खतरा उसको वरिपरि पर्दछ र समस्या नजिक छ। बाशानको बलिया साँढेहरूको जमघटको रूपमा उहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। तसर्थ, उसले उहाँलाई मदत र छुटकारा दिन ईश्वरलाई पुकार्छ, यस्तो परिस्थितिमा आफूलाई भेट्दा हामीले पनि गर्नुपर्ने हो।
पद २१ र २२: तिनीहरूले सिंह र यात्रा गर्दै मेरो मुखमा आफ्ना मुख खोले। म पानी जस्तै पोखे छु, र मेरा सबै हड्डी संयुक्त बाहिर छन्: मेरो हृदय मोम जस्तै छ; यो मेरो आन्द्राको बीचमा पग्लियो।
भजनरचयिताले उनको जीवनमा आउने समस्याहरू उहाँमा परेको प्रभावको वर्णन गरे। तिनीहरू उसको विरुद्धमा सबै प्रकारको कुरा गर्न आफ्नो मुख खोल्दछन् जुन उसको मुटुमा भारी थियो। अझै खराब कुरा, यसले शारीरिक रूपमा पनि उसलाई असर गर्न थालेको छ जहाँ यस्तो देखिन्छ कि उसको हड्डीहरू संयुक्त बाहिर गइरहेका छन्। ख्रीष्टले त्यहि व्यक्तिहरूको अनुभव गर्नुभयो जुन उहाँ बचाउन आउनु भएको थियो।
पद २१ र २२: मेरो शक्ति क्षीण जत्तिकै सुक्खा छ, र मेरो जिब्रो मेरो बs्गारामा टाँसिएको छ। यसले मलाई मृत्युको धूलोमा पुर्यायो। दुष्ट मानिसहरू “कुकुरहरू” झैं हुन्, जो मेरो चारैतिर छन्। तिनीहरूले मेरा हात र खुट्टाहरू छेडे.
यसले ख्रीष्टका कष्टहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको छ। ऊ कुनै समय एकदम तिर्खाएको थियो र उसले उसलाई पानी पिउन लगाउन लगायो। तर पानी पिउन भन्दा, तिनीहरूले उनलाई सिरका दिए। तब तिनीहरूले उसलाई क्रूसमा लगे र आफ्नो हात र खुट्टाहरूमा ना with्गी घेरिए, र आफ्ना पापहरूका लागि उहाँलाई छोडिदिए।
पद १ & र १:: म मेरा सबै हाडहरू भन्न सक्छु: तिनीहरू मलाई हेर्छन् र हेर्छन्। ती मानिसहरूले मेरो लुगाहरू बाँडिरहेका छन् र तिनीहरूले मेरो पोशाकमा चिट्ठा हाले।
तिनीहरूले ख्रीष्टलाई यातना दिए जब सम्म उसको हड्डीहरू शरीरमा देखिन्थ्यो तब सम्म ती हड्डीहरू बाहिर निस्के। उनीहरूले उनको पोशाक पनि लिए र यसमा चिट्ठा हाले।
पद & र।: तर मलाई बाट तिमी टाढा हुन, हे प्रभु: हे मेरो बल, मलाई सहयोग गर्न हतार तिमीलाई। मेरो प्राणलाई तरवारबाट बचाउनुहोस्! कुकुरको शक्तिबाट मेरो प्रिय.
ऊ त्यस ठाउँमा पुगे जहाँ उनी परमेश्वरबाट भएको दु: ख हटाउन चाहन्थे। ऊ हतारहतार उसलाई छुटाउन र उहाँलाई देखि टाढा नहेर्न भगवान मा उहाँलाई आफ्नो अनुहार टाढा नहेर्नुहोस्।
पद & र।: मलाई सिंहको मुखबाट बचाउनुहोस्, किनकि तपाईंले मलाई हार्दिकको सिsबाट सुनेको छ। हे परमप्रभु, म तपाईंको विषयमा मेरा दाज्यू-भाइहरूलाई भन्नेछु। महासभामा म तपाईंको प्रशंसा गाउनें छु।
उसले उहाँलाई क्रूसमा टाँग्नेहरूको हातबाट बचाउन र बचाउनको लागि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्दछ। उसले मानिसहरूलाई परमेश्वरको सहायताको प्रशंसा गर्ने र प्रमाणित गर्ने वचन दिन्छ यदि यो उहाँको लागि गरिएको हो भने।
पद & र।: प्रभु डर छ कि तिमीहरू, उहाँको प्रशंसा; हे याकूबका सबै सन्तान हो, उहाँलाई महिमा प्रदान गर! हे इस्राएलका सबै मानिसहरू, उहाँसँग डराउनु पर्छ। उसले कष्टमा पर्ने कष्टलाई घृणा गरेन वा घृणा गरेन। उसले आफ्नो अनुहार लुकाएन। तर जब उसले उनलाई बोलायो, ​​उसले प्रार्थना गर्यो.
उनले आफ्ना भाइहरू - इस्राएलका सन्तानहरूलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्न आह्वान गर्दछ किनकि उसले कष्टमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्न सक्षम छ। उहाँलाई प्रार्थना गर्ने सबैबाट परमेश्वर आफ्नो अनुहार हट्नुहुन्न; उहाँले तिनीहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ।
पद & र।: मेरो प्रशंसा ठूलो मण्डलीमा तँ हुनेछ; म उहाँसँग डराउने छु अनि म उहाँको उपासना गर्छु। नम्रहरूले खानेछन् र सन्तुष्ट हुनेछन्! ती मानिसहरूले उहाँलाई खोज्ने परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछन्, तपाईंको हृदय सदा सर्वदा जीवित रहनेछ।
उसले फेरि एकपटक घोषणा ग he्यो कि उसले मण्डलीको बीचमा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछु र उसले तिनीहरूको आवाज पनि तिर्ने छैन। यसैले ती सबै जो नम्र छन् उही त्यस्तै गर्नेछन् र भगवानले उनीहरूलाई भलाइ र दीर्घायु द्वारा सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ। जब येशू आउनुभयो तब उहाँले त्यसै गर्नुभयो। उहाँले परमेश्वरको गवाहीलाई अब हामी विश्वास छ कि, हामी उहाँको भलाइको आनन्द उठाउन सक्छौं, आफ्नो भाइहरू हामीले घोषणा गरे।
पद २१ र २२: संसारको सबै समाप्त सम्झनेछैनँ र प्रभुको निम्ति सक्रिय: र राष्ट्रका सबै kindreds तिमीलाई अघि उपासना गर्नेछन्। किनभने राज्य मालिकको हो र उनी अन्य राष्ट्रहरूका शासक हुन्।
ख्रीष्टको गवाहीबाट सबै मानिसहरु परमेश्वरको उपासना गर्न आउँनेछन्। परमेश्वर पृथ्वी र सबै मानिसहरूका लागि शासक हुनुहुन्छ तर पापले तिनीहरूको हृदय परमेश्वरदेखि टाढा राख्यो। यही कारणले येशू आउनुभयो, मानिसजातिलाई उनीहरूको शासकमा फर्काउन र जातिहरूलाई आफ्नो राजामा फर्काउन। उसको कष्ट र रगत बहाएर, यो सम्भव भएको थियो।
पद 29: ती सबै मानिसहरू जो यस पृथ्वीमा बोसो बोक्छन्, तिनीहरूले आराधना र पूजा गर्नेछन्। जो धुलोमा लडछन् तिनीहरू अघि शिर झुकाउँनेछन्। कोही पनि आफ्नो प्राण जीवित राख्न सक्दैनन्।
ख्रीष्टको मृत्युले सबै क्यालिबेरका मानिसहरूलाई परमेश्वरको आराधना गर्ने ठाउँ प्रदान गर्‍यो। धनी र गरिब, जसमध्ये कसैले पनि आफूलाई जीवित राख्न सक्दैन। हामी देख्छौं कि धर्मशास्त्रमा कसरी पिताले उनीहरूसँग मिलाप गर्ने उद्देश्यले गरीब, धनी, पापीहरू र विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूलाई आफूसित आफुतिर खिच्नुभयो।
पद २१ र २२: एउटा बीऊले उसको सेवा गर्छ। यो पुस्ताको लागि परमप्रभुलाई लेखाइनेछ। तिनीहरू आउनेछन्, र तिनीहरूका सन्तानहरूलाई, जो यो काम गर्‍यो, भनेर घोषणा गर्नेछन्.
अन्तमा, ख्रीष्टको मृत्युको कारण, हरेक पुस्तामा सँधै बिउ छ जसले बुबाको सेवा गर्दछ। पुरुषहरू परमेश्वरको सेवाप्रति आफ्नो वफादार रहन जारी राख्नेछन र अधिक, तिनीहरूले क्रूसमा ख्रीष्टले तिर्नुभएको मूल्य घोषणा गर्न जारी राख्नेछन्। आज हामी विश्वासीहरूको रूपमा यो गर्दछौं, परमेश्वरको सेवा गर्दछौं र हाम्रा प्रभु येशूको मृत्युको गवाही दिन्छौं।
मलाई कहिले यो PSALM को आवश्यकता छ?
प्रथमतः, हाम्रो निम्ति ख्रीष्टले कष्ट भोग्नु परेको पीडितलाई बुझ्न भजनलाई अत्यन्त आवश्यक छ। यद्यपि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका लागि यो भजन निम्न तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ:
जब हामीलाई समस्याको समयमा भगवानलाई सहायता गर्न आवाश्यक हुन्छ।
जब हामी मानिसहरुको दुष्टताले घेरिएका हुन्छौं र हामीलाई छुटकारा चाहिन्छ।
जब हामीलाई परमेश्वरमा हाम्रो भरोसा चाहिन्छ भने उहाँ फेरि जाग्न सक्नुहुन्छ।
जब हामी हाम्रोलागि ख्रीष्टको मृत्युको फाइदा र हामीप्रति उसको सबै भलाइको गणना गर्न चाहन्छौं।
PSALM 22 प्रार्थनाहरू।
प्रभु येशू, तपाईंले मेरो लागि तिर्नुभएको मूल्य र मेरो जीवनमा ल्याइएको राम्रोताको लागि म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु। येशूको नाममा महिमा दिनुहोस्।
प्रभु, म तिमीलाई भन्छु कि आपत्‌को घडीमा मबाट टाढा नहुनुहोस्, मेरो सहायता गर्न आउनुहोस् र येशूको नाममा मलाई सुदृढ पार्नुहोस्।
हे बुबा, मलाई तिरस्कार गर्नेहरूबाट मलाई बचाउनुहोस् र येशूको नाममा सिंहको मुखबाट।
तपाईंको वचन अनुसार, मलाई तरवारबाट बचाउनुहोस् र येशूको नाममा मेरो जीवन बचाउनुहोस्।
प्रभु, म तपाईंको सेवा गर्ने सुअवसरको लागि धन्यवाद दिन्छु र यो दिन घोषणा गर्दछु कि म तपाईंको सेवा गर्नेछु र तपाईंको नामहरू पुस्तादेखि पुस्तासम्म येशूका नाममा घोषणा गर्नेछु।
म घोषणा गर्दछु कि म येशू नामको रातको हरेक खराब आक्रमणहरू द्वारा सुरक्षित छु
हे बुबा, म घोषणा गर्दछु कि मेरो प्राण तपाईंमा सुरक्षित छ, यसैले मेरा शत्रुहरूले येशूको नाममा मलाई कष्ट दिन सक्दैनन्।
म येशूका नाममा मेरो भाग्य सहयोगीहरू मलाई जडान गर्न प्रभुका दूतहरु जारी
म येशूको नाममा जीवन मा कहिल्यै फँसिने छैन
म येशूको नाम मा जीवन मा मद्दत कहिल्यै अभाव हुनेछ
अघिल्लो लेखमाभजन १२2 अर्थ पद पद द्वारा
अर्को लेखमाभजन १२1 अर्थ पद पद द्वारा